Fran Lebowitz: Voice Satirical nke New York's Golden Age | Akwụkwọ akụkọ
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Akụkọ
Okwu Fran Lebowitz kwuru
Fran Lebowitz bụ onye odee America bụ onye pụtara ìhè n'ọgwụgwụ afọ iri asaa na mbipụta nke akwụkwọ mbụ ya: Ndụ obodo ukwu (1978). N'ime ya, ọ na-eme ihe ọchị nke ndụ kwa ụbọchị nke ọha mmadụ New York. Àgwà adịghị asọpụrụ ya emewo ka ọ pụta ìhè n'ìgwè mmadụ. N'ihi ụzọ ya dị iche iche, ọtụtụ ndị edemede na-atụnyere ya na onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye ọchị Dorothy Parker.
Kemgbe XNUMX ọ nọ na-ata ahụhụ site na "ngbochi onye edemede." Ihe ikpeazụ o kere bụ egwuregwu ụmụaka Mazị Chas na Lisa Sue zutere Pandas (1994). Agbanyeghị, nke ahụ akwụsịbeghị ya n'ọrụ ya kwa ụbọchị. Lebowitz emeela nke ọma na mpaghara ndị ọzọ, dị ka telivishọn na ihe nkiri, dịka, na mgbakwunye na ịbụ onye edemede, ọ bụ onye na-agụ ọchị, onye nta akụkọ, na ọkà okwu.. Na 2007, ọ natara nhọpụta magazin Ibe Efu dị ka otu n'ime ndị kasị mara ndị inyom nke afọ.
1 Nchịkọta akụkọ ndụ nke onye edemede
1.1 Ogbo ọrụ
1.2 Ọrụ edemede
1.3 Onye na-ede akwụkwọ
1.4 Onye nkuzi
1.5 Na-arụ ọrụ na mgbasa ozi audiovisual
1.6 Usoro akwụkwọ
1.7 Nguzogide teknụzụ na njem
2 Akwụkwọ Fran Lebowitz
2.1 Ndụ obodo ukwu (1978)
2.2 Ọmụmụ Ọha na eze (1981)
2.3 Onye na-agụ Fran Lebowitz (1994)
2.4 Maazị Chas na Lisa Sue zutere Pandas (1994)
Nchịkọta akụkọ ndụ nke onye edemede
A mụrụ Frances Ann Lebowitz na Fraịde October 27, 1950 na obodo Morristown na New Jersey. O tolitere n'obodo ya, n'ebe ezinụlọ na-emebu ndị Juu. Ọ bụ nwa agbọghọ siri ike ma na-enupụ isi, n'ihi nke a, a chụpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ Episcopal na-ebo ya ebubo na ọ na-ebuso ya "onye iro izugbe".
Ebe ọ na-enweghị ike ịga n’ihu n’ihe ọmụmụ ya, ọ malitere ịrụ ọrụ n’ọzụzụ dị iche iche. Ọ na-ere eriri, bụ onye na-anya tagzi na ọbụna hichaa ụlọ. Otu n'ime ọrụ mbụ ya dị ịrịba ama bụ na mpaghara mgbasa ozi oghere ahịa nke magazin ahụ Mgbanwe. Na magazin a, o bipụtara ihe odide mbụ ya, na mgbakwunye, ọ malitere na nyocha akwụkwọ na ihe nkiri.
Obere oge gachara, Andy Warhol goro ya dị ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ Interview. N'ikpeazụ, ọ rụrụ ọrụ ruo otu oge na American Feminist magazin Miss.
Na 1978 o bipụtara akwụkwọ mbụ ya: Ndụ Metropolitan, nke bụ ihe kacha ere kemgbe mmalite ya. Afọ atọ ka e mesịrị, ya na ọrụ nke abụọ ya. Mmụta mmekọrịta ọha (1981), nwere otu nnabata nke ndị na-agụ ya. Mgbe o jisịrị ihe odide abụọ ahụ nọrọ ebe mbụ na ire ere, ọtụtụ ndị nduzi nyere ya nnukwu ego iji mee ka ha dị na sinima, Otú ọ dị, ọ jụrụ ihe niile.
Afọ iri na atọ ka e mesịrị E deziri ma bipụta ha abụọ dị ka: Onye na-agụ Fran Lebowitz (1994). N'otu afọ ahụ, o gosipụtara ọrụ ọhụrụ ya, akụkọ maka ụmụaka a na-akpọ: Mazị Chas na Lisa Sue zutere Pandas (1994).
Kemgbe akwụkwọ ikpeazụ ya na 1994, Lebowitz emesowo ngọngọ okike n'akụkụ akwụkwọ ozi. N'agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ọrụ agụmagụ, o nwebeghị ike ịrụzu nke ọ bụla. Otu ikpe n'ọha ọha bụ nke ọrụ ya Ihe ịrịba ama nke akụ na ụba, nke onye ode akwụkwọ yigharịrị kemgbe ọtụtụ afọ. Na 2004, magazin Ibe Efu bipụtara mbiri nke ọrụ ya Ọganihu, mana ruo taa, o mechabeghị ya.
N'agbanyeghị na a ma ama maka akwụkwọ ya na ọchị ọchị ya. o meela nke ọma n'akụkụ ndị dị ka ikwu okwu n'ihu ọha. N'ezie, Lebowitz abụrụla otu n'ime ndị nkuzi a na-asọpụrụ na ndị a na-achọsi ike na US taa. O kwuwo okwu banyere nke a:
"Ọ bụ ihe m nwere ike ime na-enweghị mgbalị ọ bụla, kacha m na ndụ a. Enwere m obi ụtọ ikwu okwu, mana naanị ihe m kpọrọ asị bụ ịbanye na saịtị ahụ. Onye ọ bụla nọ n'ụwa nke batara n'ụgbọelu kwesịrị ịnata akwụkwọ nlele. Enweghị m ike ikweta na ha na-ana gị ụgwọ maka ahụmịhe ahụ."
Na-arụ ọrụ na mgbasa ozi audiovisual
Afọ asaa (2001-2007) na-esonye mgbe niile na usoro Iwu & Iwu, dị ka agwa onye ọka ikpe Janice Goldberg. Na mgbakwunye, ọ pụtawo na ihe ngosi okwu dị iche iche na Conan O'Brien, Jimmy Fallon na Bill Maher. Na 2013 ọ bụ akụkụ nke ndị na-eme ihe nkiri ahụ Wolf nke Wall Street, Martin Scorsese duziri.
Ọzọkwa, adịla na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, gụnyere Ahụmahụ America, gbasara Susan Sontag (2014) y Mapplethorpe: Lee foto ndị a (2016). Dị ka a ga - asị na ihe ndị dị n'elu ezughi oke, Martin Scorsese durukwa ihe nkiri akwụkwọ akụkọ na Lebowitz maka HBOkpọọ Ọhaneze na-ekwu (2010).
Na 2021 ọ gbara ama na akwụkwọ akụkọ Mee ka ọ̀ bụ obodo, nke malitere na Netflix ikpo okwu ma nwee nkeji 6 dị mkpirikpi. Kemgbe ọ malitere mgbasa ozi ya, o meririla ọtụtụ narị ndị egwu na-amaghị maka onye nzuzu a. curmudgeon na fun n'otu oge ahụ. Na ihe omume ọ bụla, Lebowitz na onye isi Martin Scorsese na-akparịta ụka gbasara ọmarịcha ụbọchị New York.
Nke a bụ ihe ịga nke ọma nke ọrụ ahụ, na ahọpụtara maka Emmy 2021 na ngalaba nke akwụkwọ akụkọ kacha mma.
Nguzogide teknụzụ na njem
Otu n'ime akụkụ nke nke onye edemede ọ bụ n'ihi na ha jụrụ teknụzụ. N'ihi ya, o nweghị ekwentị ma ọ bụ kọmputa. Banyere nke a, o kwuru, sị: “… Enweghị m kọmputa. Ahụghị m ihe ọ bụla na ịntanetị, nke bụ mkpebi dị mma taa ". Na mgbakwunye, na-ekwu na ọ dịghị amasị ya ịbanye n'ụgbọelu, ya mere ọ na-esikebe ike ịga ezumike, ebe ọ na-ewere ya dị ka ihe omume jọgburu onwe ya.
Akwụkwọ Fran Lebowitz
Ndụ obodo ukwu (1978)
Ọ bụ nchịkọta akụkọ na-atọ ọchị. E bipụtara ya na Spanish dị ka Ndụ Metropolitan (1984). N'ime ederede, Onye edemede ahụ mere akụkọ akụkọ dị egwu banyere otú ndụ dị maka ndị nde mmadụ, ọmarịcha na ndị a ma ama bi na New York.. Na mgbakwunye, ọ kọwara n'ụzọ zuru ezu - na-emetụ n'ahụ - ka otu ndị na-elekọta mmadụ si etolite na mpaghara dịka ejiji, nka na akwụkwọ.
Onye edemede ahụ kọrọ akụkọ gburugburu ebe ọ maara nke ọma, ebe ọ bụ na o so na gburugburu ahụ. Nke bụ eziokwu nke na-egosi otú obodo ahụ si tinye aka n'ihe odide ya nke na ọ dịghị onye n'ime ha gaara ebi n'obodo ọzọ, obere na mba ahụ. Ihe a na-ahụkarị n'etiti ha bụ ịkpọasị n'ime ime obodo ndị okike, anụ ụlọ, ndị na-agụghị akwụkwọ na ụmụaka gbara ya gburugburu.
Ndụ obodo ukwu
Mmụta mmekọrịta ọha (1981)
Ọ bụ akwụkwọ nke abụọ nke onye edemede. E bipụtara ya na Spanish dị ka Nkenke akwụkwọ ntuziaka nke civility (1984). N'ihi ọrụ ya gara aga, a nabatara nchịkọta a nke ọma ma bụrụkwa nke a kacha ere. Dị ka ọrụ mbụ ya, O nwere otu akụkọ ebe o mere satires banyere ndị mmadụ, ihe ụtọ na gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbe akụkọ ha na-atọ ọchị ọchị, E gosipụtara ha n'ụzọ ziri ezi, n'amamihe, na n'ụzọ na-ezighị ezi.
Onye na-agụ Fran Lebowitz (1994)
Ọrụ edemede nke atọ a bụ ihe sitere na njikọ nke akwụkwọ abụọ mbụ ya bipụtara, Ndụ obodo ukwu (1978) na Mmụta mmekọrịta ọha (1981). Edeziri ihe odide ndị ahụ iji tinye data nke nyere ọha mmadụ aka ịmụtakwu banyere ndụ na ọrụ nke onye edemede. Site na ihe a, akwụkwọ akụkọ ga-apụta Ọhaneze na-ekwu (2010), Scorsese duziri.
Onye na-agụ Fran Lebowitz
Mazị Chas na Lisa Sue zutere Pandas (1994)
Ọ bụ akwụkwọ echiche efu maka ụmụaka, nke na-akọwa njem nke ụmụaka abụọ dị afọ 7 nwere nnukwu anụ ọhịa bea abụọ. Onye edemede ahụ na-egosi akụkọ na ihe ọchị ọchị ya na-ahụkarị, nke na-egosi Mr. Chas na Lisa Sue. Ka ụmụ ọhụrụ na-enyocha ụlọ na Manhattan, ha na-achọpụta ụzọ pandas aha ya bụ: Pandemonium na Don't Panda to Public. Ọrụ ahụ nwere ihe atụ nke Michael Graves.
Mazị Chas na Lisa Sue ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Fran lebowitz